गच्छदार र निधिको अलग प्यानल हुनसक्ने - Jhilko
गच्छदार र निधिको अलग प्यानल हुनसक्ने
काठमाडौं । पार्टीभित्रको आफ्नो इतरपक्षलाई एक ठाउँमा उभिन नसक्ने रणनीतिका लागि कांग्रेस सभापति देउवा जुटेका छन् । इतर पक्ष एक ढिक्का भए देउवाले पार्टी सभापति पदबाट हात धुनु पर्ने निश्चित छ भने एक ढिक्का नभए फेरि सभापति पद हात पार्ने निश्चित छ । गत १३ औं महाधिबेशनमा इतर पक्ष एक ढिक्का नभएकै कारण देउवाले सभापति पदमा बाजी मारेका थिए ।
१४ औं महाधिबेशन २०७७ फागुन २० गते गर्ने तय भए पनि महाधिबेशन प्रतिनिधिहरु भने आगामी फागुन २० भित्र चयन भई सक्नेछन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु चयन भई सकेपछि कुन पक्ष कति बलियो छ ? भन्ने मोटामोटी आँकलन हुन्छ । त्यस बाहेक आर्थिक चलखेल तथा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको आशिर्वादले पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । करिव १५ प्रतिशत प्रतिनिधि जसले धेरै रकम दियो उसैलाई भोट हाल्ने खालका निर्वाचित भएर आउने गरेको र करिव १५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु भारतीय दूतावासको प्रभावमा रहने गरेको विगतको अनुभव छ ।
आगामी १४ औं महाधिबेशनमा सभापति देउवा र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी कांग्रेसभित्रको समिकरण विकास भएको छ । भारतको समर्थन आफूले लिने प्रयत्नमा दुवै जना अहिलेदेखि नै जुटेका छन् । कांग्रेसका एक विश्लेषक भन्छन्– ‘भारतले देउवालाई निरन्तरता दिन चाहेमा कोइराला पक्षबाट दुई जना उम्मेदवार हुन्छन्, कोइरालालाई साथ दिन चाहेमा देउवा पक्षबाट दुई जना उम्मेदवार हुन्छन् ।’
अहिलेको समिकरण हेर्दा डा. शशांकलाई प्यानल बनाउन जति सहज अवस्था छ त्यति सहज अवस्था देउवालाई छैन । उपसभापति पदमा दुई जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ । देउवा पक्षमा उपसभापति पदका लागि विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्का गरी चार जनाको सशक्त दावी छ । जसमध्ये निधि र गच्छदार कुनै हालतमा पनि पछि हट्ने अवस्था छैन । दुवै जना मधेसीलाई अघि सार्न सक्ने अवस्थामा देउवा छैनन् । यी दुईमध्ये एक जनालाई देउवाले त्याग्नु पर्नेछ । महामन्त्री पदमा प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाण मुख्य दावेदार हुन् । तर विश्वप्रकाश शर्माका लागि पनि त्यतिकै दवाव छ । देउवाको ससुराली खलकले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अघि बढाउन उत्तिकै दबाव दिएको छ ।
सात वटा सहमहामन्त्री पदका लागि भने देउवा पक्षलाई खासै समस्या छैन । बरु कोइराला पक्षलाई समस्या छ । देउवा पक्षबाट सहमहामन्त्रीको दावेदारहरुमा स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्दराज पोखरेल, भीष्म आङ्देम्वे, महेन्द्र यादव, उदयशमशेर राणा, चित्रलेखा यादव, डिना उपाध्याय, डा. डिला संग्रौला, ध्रुव वाग्ले, रमेश लेखक, बीरबहादुर बलायर, किशोर सिंह राठौर, किरण पौडेल लगायतका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार कोइराला पक्षले वरिष्ठ नेता पौडेललाई मौका आएको बेला प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाउने आश्वासनका साथ विश्वासमा लिएको छ । उपसभापति पदमा प्रकाशमान सिँहलाई अघि बढाउने निश्चित जस्तै छ भने महामन्त्री पदमा गगन थापालाई अघि बढाउने निश्चित जस्तै छ । उपसभापति र महामन्त्रीका अरु कोटामा भने धेरै दावेदार छन् । कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत र अर्जुननर सिँह केसी मुख्य दावेदार हुन् । तर, गगन थापालाई महामन्त्रीका रुपमा अघि सारेपछि केसी र सिटौलाले चित्त बुझाउने अनुमान कोइराला परिवारका नेताहरुले गरेका छन् । देउवाबाट गच्छदार र निधिमध्ये एक जनालाई फुटाएर आफ्नो टिमबाट महामन्त्री पदमा अघि सार्ने तयारी पनि कोइराला पक्षले गरेको छ ।
गच्छदार र निधि एउटै प्यानलमा अटाउने सम्भावना कम रहेका कारण यसबाट कोइराला पक्षलाई लाभ मिल्ने अवस्था छ । सहमहामन्त्री पदका लागि भने कोइराला पक्षमा त्यति सजिलो छैन । डा. मीनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरे, उमाकान्त चौधरी, कल्याण गुरुङ, नविन्द्रराज जोशी, डा. चन्द्र भण्डारी, जीवन परियार, वद्री पाण्डे, गोविन्द भट्टराई, किरण यादव, शंकर भण्डारी, प्रकाश स्नेही लगायतको दावी छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
रुसी फेदोर रोबोट अन्तरिक्ष केन्द्रमा
भैँसेपाटीमा मौलिक शैलीका मन्त्री निवास बन्ने
'मेरो जस्तै अंग त उहाँहरूले घरमै बूढीहरूकै हेरी हाल्नुहुन्छ...
हो नि ! इटहरीमा उपमेयरले मिटिङ गरेर मलाई स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आउन रोक...
निगमको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक वाइड बडी जहाजले लामो गन्तव्यको उडान भर्न लागेको...
सप्तरीको ६ पानी उद्योगमा शिलबन्दी